Ifom: Yandisa iinguqu ngokuBungqina beNtlalo | Martech Zone
NgoLwesibini, Juni 19, 2018 NgoMvulo, Novemba 22, 2021 Douglas Karr
Nabani na osebenza kwisithuba se-ecommerce uza kukuxelela ukuba eyona nto inkulu ukoyisa ukuthenga ayiloxabiso, kukuthenjwa. Ukuthenga kwindawo entsha yokuthenga kuthabatha ithuba lokholo kumthengi ongazange wathenga kwisiza ngaphambili.
Izikhombisi zetrust Njenge-SSL eyandisiweyo, ukubeka esweni ukhuseleko lomntu wesithathu, kunye nokulinganiswa kunye nokuphononongwa konke kubaluleke kakhulu kwiindawo zorhwebo kuba zibonelela nge-shopper ngengqondo yokuba basebenza nenkampani elungileyo eya kuzalisekisa isithembiso sayo. Ininzi into onokuyenza, nangona kunjalo!
I-Fomo ilingana ne-intanethi kwivenkile ezixakekileyo, ehambisa ubungqina boluntu kuye wonke umntu otyelele indawo yakho. Obu bungqina boluntu bunokukhuthaza ukuguqulwa ngama-40 ukuya kuma-200%, otshintsha umdlalo kuyo nayiphi na ivenkile ekwi-intanethi. Nantsi umfanekiso wesiboniso seFomo kwivenkile esebenzayo:
Ngokubonisa ukuthengisa njengoko kusenzeka kwindawo yakho, unezibonelelo ezintathu ngaphezulu kwabakhuphisana nabo:
Yenza Imvo yongxamiseko -I-Fomo ibonisa ii-odolo njengoko zisenzeka, zisenza ivenkile yakho ibe yindawo enomdla kwaye ikhuthaze isenzo somthengi.
Abathengi baziva beyinxalenye yesihlwele -Imiboniso yeFomo ifana nobungqina bexesha lokwenyani kwivenkile yakho-ukubona ezinye ukuthenga kwakha ukuzithemba kwangoko.
Ubungqina beNtlalo + Ukuthembeka -Abathengi abanokubona ukuthengwa kwabantu - ukunika ukuthembeka kwivenkile yakho kunye nokwakha ukuthembela ngomsebenzisi.
I-Fomo okwangoku idityaniswe ne-3Dcart, i-Active Campaign, i-Aweber, i-BigCommerce, i-Calendly, i-Celery, i-ClickBank, i-ClickFunnels, i-Cliniko, i-ConvertKit, i-Cratejoy, eyonwabileyo, i-Drip, i-Ecwid, i-Eventbrite, i-Facebook, i-Gatsby, Fumana impendulo, uphononongo lukaGoogle, Gumroad, Hubspot, Infusionsoft, Instagram, Instapage, Intercom, Judgeme, Kindful, Izinto zokuhamba, Magento, Mailchimp, Neto, Privy, ReferralCandy, Selz, SendOwl, Shoelace, Shopify, Shopper evunyiweyo, squarespace, Stamped, Stripe, Teachable, ThriveCart, Trustpilot, Ifomu, Unbounce, Universe, ViralSweep, Wix, Woo Commerce, WordPress, Yotpo, Zapier, Zaxaa, kwaye bane-API.
Ungayijonga indlela imiyalezo yeFomo echaphazela ngayo ukuthengisa kwakho. Umsebenzisi omnye weFomo wabelane ukuba kungaphelanga inyanga ebone ukuthengiselana okungama-16 ngokuthe ngqo okuthe ngqo kusetyenziso kunye nobungakanani be-odolo engaphezulu, okukhokelela ngaphezulu kwe- $ 1,500 kwingeniso eyongezelelweyo. Yimbuyekezo entle kutyalo-mali ngesixhobo esibiza imali encinci njenge- $ 29 ngenyanga!
Qalisa ukulingwa kwakho kweFomo yasimahla namhlanje!
tags: 3dcartIphulo eliSebenzayoAWeberBigCommerceikhalendaIsilerinqakrazaClickFunnelsEklinikiGuqula iKitukonwabaukuthembekaNdonywatyisiweukuthontsizaubungqina be-ecommerce kwezentlaloEcwidisiganekoFacebookKwimigbyFumana impenduloUphononongo lukaGoogleGumroadhubspotyandisa utshintshoInfusionsoftinstagramUkukhwelaintercomJajimeNobubeleIikhokeloMagentomailchimpnetoyazisaliweyoukuthunyelwaselzThumelaOwlShoelacethengaIvenkile yokongezaIvenkile zeefowuniizixhobo zokuthengaUmthengi uvunyiweubungqina boluntusquaeveraceIsisitampungombalaKu fundiswaIkratshiizikhombisi zetrustumvaUhlobo lohloboa ngafuniyonkeIntsholongwanewixwoo yorhweboWordPressYotpozapperZaxaa